Enweta njem njem na mmanụ ala: North Africa na Edge of Collapse
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Enweta njem njem na mmanụ ala: North Africa na Edge of Collapse
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Algeria • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • investments • Akụkọ kacha ọhụrụ na Libya • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ dị iche iche
Dị ka ọnụ ọgụgụ ndị ọchịchị si kwuo, Morocco edewo ọrịa 4,065 COVID-19 na ọnwụ 161 site na akwụkwọ akụkọ coronavirus; Algeria dị 3,382 na ọnwụ 425; Tunisia 939 metụtara na ọnwụ 38; na Libya 61 ikpe na ọnwụ abụọ.
Akwụkwọ akụkọ coronavirus bịarutere na North Africa mana ọnụọgụ nke COVID-19 na-arịwanye elu n'ike n'ike.
Dabere na ọnụ ọgụgụ gọọmentị, Morocco edekọwo ọrịa 4,065 na ọnwụ 161 site na akwụkwọ akụkọ coronavirus; Algeria dị 3,382 na ọnwụ 425; Tunisia 939 metụtara na ọnwụ 38; na Libya 61 ikpe na ọnwụ abụọ.
Hamid Goumrassa, onye nyocha na onye nta akụkọ na ụlọ ọrụ Algiers El Khabar akwụkwọ akụkọ, gwara The Media Line na n'agbanyeghị ọdịiche dị na mgbasa na mmetụta nke nje a n'etiti mba ndị dị na North Africa, Algeria na Morocco yiri nke ọnụọgụ. "Na mgbakwunye, mba abụọ a nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ọnwụ ọ bụghị naanị n'etiti mba North Africa kamakwa na mpaghara Afrika," ka o kwuru.
Goumrassa kọwara na ọ bụ ndị Algeria si Europe, karịchaa Spain na France, butere ọtụtụ ọrịa ahụ, “ndị butere ndị ikwu ha na gburugburu ha, nke butere aka na-agbasa nje a.”
O kwuru na n'adịghị ka Algeria na Libya, bụ ndị akụ na ụba ha dabere kpamkpam na ego ha nwetara site na mbupụ mmanụ na gas, Tunisia na Morocco na-adaberekarị na njem. Akụkụ abụọ a emebiwo ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ.
“Kemgbe afọ 2014, Algeria nọ na-eche nsogbu nke ụkọ akụ na ụba ụkọ n’ihi mbelata ọnụahịa mmanụ. Ugbu a ọnụahịa ndị ahụ adaala, ọnọdụ ahụ adịwanye mgbagwoju anya, ”ka o kwuru.
Goumrassa kwuru na gọọmentị Algeria na-anwa ime ka ụmụ amaala kwenye na ọnọdụ a nọ na nchịkwa.
Ma, ọ gbakwụnyere, “Ndị ọkachamara na-ahụ maka ego nwere enweghị nchekwube ọbụna tupu nsogbu coronavirus. Echeghị m na gọọmentị nwere ike ibuli ibu [ụtụ] na akụnụba; enwere mpe. Algeria ga-enwe ezigbo nsogbu enweghị atụ. "
Ndị ọkachamara ahụike mba ụwa ebuola amụma na ndị ọrụ China ga-ebufe COVID-19 na Africa mana ha mechara kwadoo na ndị ahụ achọpụtara rutere Europe. N'ihi ya, ihe ka ọtụtụ ná mba Africa kwụsịrị ụgbọ elu ma mechie ókèala ha.
N’agha obodo meriri Libya, Ziad Dghem, onye otu ụlọ nnọchite anya nke Tobruk (nke akpọrọ “gọọmentị Tobruk” nke ndị agha mba Libya kwupụtara iguzosi ike n’ihe) na onye guzobere Federal Movement na Libya, gwara The Usoro mgbasa ozi na ọnọdụ adịghị mma n'ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụghịkwa na nchekwa, ndụ na ọnọdụ akụ na ụba, "ọkachasị na ọgbaghara ọnụahịa mmanụ na-emetụta mba dị ka Libya, nke naanị akụ na ụba ya bụ mmanụ."
Agbanyeghị, Dghem gosipụtara na obere ọnụ ọgụgụ na nnukwu mmanụ ga-enyere mba a aka ịnagide nsogbu ahụ.
"Ruo otu oke, ndị ọchịchị Libya na-achịkwa ọnọdụ gbasara mgbasa nke nje a, ebe ọbụlagodi n'oge nkịtị mba ahụ abụghị ebe maka ndị njem ma ọ bụ ndị njem nleta ma ọ bụ ebe azụmahịa," ka ọ gara n'ihu. "Mba ndị ahụ nwere azụmaahịa na njem njem na-emetụta mgbe niile gbasara mgbasa nke COVID-19."
Donia Bin Othman bụ onye ọkaiwu na onye na-enyocha ndọrọndọrọ ọchịchị gwara ndị Media Line na ndị Tunisia anọrọla onwe ha iche ruo ihe karịrị otu ọnwa. Kemgbe mmalite nke nsogbu a, gọọmentị lekwasịrị anya na ndị mmadụ nwere ike ibute nje ahụ, wee mee mkpebi ngwa ngwa iji kwado obere ụlọ ọrụ akụ na ụba na nke ọkara.
"Banyere nkwadebe akụ na ụba, praịm minista kwupụtara enyemaka mmadụ maka ihe dịka ezinụlọ 900,000 nke ngụkọta atụmatụ na $ 50 nde (145 nde ndị dinari na Tunisia)," Bin Othman kọwara. Na mgbakwunye, ekenyela ụlọ ọrụ na ndị enweghị ọrụ $ 100 nde (290 nde dinarịs) n'ihi nsonazụ nsogbu coronavirus. ”
Ọzọkwa, o kwuru na steeti ahụ ekwela nkwa inye ngwugwu 60,000 nke nri site na Tunisia Union for Social Security, iji nyefee ha n'ụlọ n'etiti Eprel 3 na njedebe nke Ramadan.
“Enwere nnukwu mbọ a na-eme, na ihe kachasị mkpa bụ ịhazi ọrụ na ọkwa nke Mịnịstrị na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze. Obi abụọ adịghị ya na ihe dị mma esitewo na nsogbu a pụta: a manyere anyị ịrụ ọrụ ngwa ngwa na digitization, anyị ga-aga n'ihu na nke a mgbe nsogbu ahụ gachara ma kọwaa ya n'ogo niile, "Bin Othman kwuru.
O kwukwara na ụdị teknụzụ a mere ka usoro gọọmentị dị mfe ma mee ka ọ dị mfe, na-eweta ọrụ dị nso na nwa amaala ma na-enyere aka belata nrụrụ aka na iwe ndị rụrụ arụ. Bin Othman kwuru, sị, "Ka anyị na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị na-etinye aka na ọkwa nchịkwa, ka anyị na-ebelata ohere maka inye aka azụ."
Nsogbu COVID-19 gosipụtara mkpa ahụike ahụike ọha na nke ọha na eze n'ozuzu ya, yana etu o si dị mkpa itinyekwu ego na ngalaba ndị a yana mgbanwe.
"Nsogbu a aghaghi iduga nputa nke uwa ohuru nke na-echegbu onwe ya banyere gburugburu ebe obibi na mbara ala anyi, tinyere ndi mmadu na-aru oru iji mepee ume ohuru na imeghari onodu, ike, na omume n'ime obodo, na atumatu ndi mmadu," Bin Othman kwuru.
Uzo ochichi njem nleta nke North Africa adighi ala, kpọmkwem site na North America mgbe ụjọ ụjọ mere n'oge na-adịbeghị anya.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa na-aru oru na North African Mba na usoro ihe omumu olile anya ha
by DIMA ABUMARIA , Usoro Mgbasa Ozi